KMF/CNOE sy SAFIDY : Nisy tsy fanarahan-dalàna ny fifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaKMF/CNOE sy SAFIDY : Nisy tsy fanarahan-dalàna ny fifidianana
28/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Efa eo ampanangonana ny porofo rehetra mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana amin’izao fotoana izao”, io no nambaran’ny filohan’ny KMF/CNOE, Andoniaina Andriamalazaray taorian’ny famoahan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nambaran’ ity filohan’ny fiarahamonim-pirenena, izay isan’ny mandray anjara betsaka amin’ny fiainan’ny firenena ity, fa tsy azo atao ambanin-javatra ny fiainam-pirenena, ka ilaina fantatra ny tsy fanarahan-dalàna, ary mila saziana. Manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna ireo, dia nilaza ny filoha nasionalin’ny KMF/CNOE, fa handray fepetra izy ireo manoloana izany. Tsy miandany amin’ iza na iza ny KMF/CNOE, fa kosa mandray ny andraikitra tandrify azy ireo, satria nanjaka ny tsy fanarahan-dalàna.
Ankilany ho an’ny fiarahamonim-pirenena SAFIDY, izay nanara-maso ny fifidianana kosa indray, dia nambaran’izy ireo fa tany tan-dalàna i Madagasikara, ka efa misy ireo andrim-panjakana napetraka manoloana ny tsy fahatomombanana nisy nandritra ny fifidianana. Izany hoe ho an’ ireo kandidà izay manana fitarainana dia tokony hanao izany eny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Ireo fitarainana ireo kosa dia tokony tsy hatao ambanin-javatra ny fandinihana azy, ary raisina araka ny tokony ho izy.
Izany hoe eto dia manara-maso akaiky ny fandehan’ny raharaham-pirenena ireo fiarahamonim-pirenena, indrindra ny fanaraha-maso ny safidim-bahoaka. Manentana ireo tompon’andraikitra voakasik’izany ihany koa izy ireo, mba handray ny andraikiny araka ny tokony ho izy.